अब देखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लागि निःशुल्क ‘ट्रायल’ दिन पाईने
काठमाडौँ । उपत्यकाका तीन यातायात व्यवस्था कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणका लागि निःशुल्क ‘ट्रायल’ सेवा शुरु गरेका छन् ।
लाइसेन्स वितरणका लागि ‘ट्रायल’ परीक्षा लिँदा शुल्क लिने व्यवस्था गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परी निःशुल्क सेवा दिन आदेश भएपछि उपत्यकाका तीन कार्यालयले शुक्रबारदेखि निःशुल्क ‘ट्रायल’ सेवा शुरु गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
निःशुल्क ‘ट्रायल’ सेवा शुरु गरेका कार्यालयमा सुकेधारा, ठूलो भर्‍याङ र भक्तपुरस्थित सल्लाघारी रहेको विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क ‘ट्रायल’ लिने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएपछि तीनै कार्यालयले चालक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई प्रस्ताव पेश गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । जसअनुसार सुकेधारा कार्यालयका लागि तीन, ठूलो भर्‍याङका लागि दुई र भक्तपुरका लागि एक प्रशिक्षण केन्द्रले आवेदन दिएका थिए ।
आवेदन दिएका प्रशिक्षण केन्द्रलाई पालैपालो ‘ट्रायल’ गर्ने अनुमति दिएको उनले बताए। सुकेधाराको ‘ट्रायल’ गर्ने अनुमति पाएको भेहिकल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि गुर्जुधाराले शुक्रबारदेखि शुरु गरेको छ । ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको केन्द्रमा शुक्रबार १५० जनाको ‘ट्रायल’ भएको प्रबन्ध निर्देशक माधवप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । पहिलो दिन शुक्रबार कार चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनेको ‘ट्रायल’ भयो ।
अरु सेवा पनि छिट्टै शुरु हुने केन्द्रले जनाएको छ । ठूलो भर्‍याङ र भक्तपुर कार्यालयले पनि यसै सातादेखि सेवा शुरु गर्ने विभागले जनाएको छ । एकान्तकुना कार्यालयले भने १० वर्षका लागि शुल्क लिएर ‘ट्रायल’ लिने सम्झौता गरिसकेकाले निःशुल्क हुने छैन ।
प्रकाशित : शनिबार, चैत १०, २०७४११:१६
अज्ञात रोगबाट गाईवस्तु भटाभट मर्न थालेपछि किसान चिन्तित !
जन्ती बोकेको टिपर दुर्घटना ! दुई जनाको मृत्यु !
लागुऔषधसहित मनोज पक्राउ
स्वर्गीय राजा बिरेन्द्रले सपनामा रुँदै यस्तो भनेपछि शान्ति पूजा लगाउने तयारी !
इञ्जिनीयरलाई गोली हानेर हत्या गर्ने श्रीलाल पक्राउ